Gịnị Ga-enyere M Aka ma Ahụ́ M Gbanwewa | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Cibemba Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Nepali Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
“Ọ naghị adịchara anyị mfe ma anyị ghọwa agbọghọ. Ụfọdụ ihe na-eme n’oge ahụ na-afụ ụfụ, na-asọ oyi, na-agbagwojukwa anya. Ọ na-adị ka otú ihe niile si agbanwe adịghị mma!”—Oksana.
“Obi dịtụ m mma, a nọtụ obere, ya ajọọ m njọ. Amaghị m ma ọ̀ bụ otú o kwesịrị isi na-eme ụmụ okorobịa, ma ọ bụ otú o mere m.”—Brian.
Oge ahụ́ ndị na-eto eto na-agbanwe nwere ike ịdị ka ebe mmadụ nọ n’ihe na-ebugharị mmadụ. Ọ na-atọ ụtọ, na-atụkwa egwu. Gịnị nwere ike inyere gị aka ma ahụ́ gị gbanwewa?
Gịnị bụ ahụ́ mmadụ ịgbanwe?
Mgbanwe a na-ahụ anya
Otú obi na-adị onye ahụ
E kwuo ya ná nkenke, oge a bụ oge ahụ́ ndị na-eto eto na-amalite ịgbanwe, ha aghọwa agbọghọ ma ọ bụ okorobịa. N’oge a, e nwere ihe ụfọdụ ga-agbanwe n’ahụ́ gị ị ga-ahụ anya, nweekwa ndị nke ị na-aghaghị ahụ anya. Mgbanwe ndị a ga-eme ka i tozuo ihe e ji nwoke eme ma ọ bụ ihe e ji nwaanyị eme, kwadebekwa ahụ́ gị maka ịmụ nwa.
Ma, ọ pụtaghị na i ruola ịbụ nne ma ọ bụ nna. Ahụ́ gị ịgbanwe na-egosi na ị bụghịzi nwata. O nwekwara ike ime gị obi ụtọ na ị bụghịzi nwata ma, obi ọjọọ nwekwara iso ya.
Ajụjụ: N’ime afọ ndị a, olee nke i chere na o kwesịrị ịbụ mmadụ ruo, ahụ́ ya amalitezie ịgbanwe?
Azịza: Ahụ́ mmadụ nwere ike ịmalite ịgbanwe ma onye ahụ ruo afọ nke ọ bụla n’ime ndị a.
Ọ pụtara na i kwesịghị ichegbuwe onwe gị ma ọ bụrụ na i ruola ihe dị ka afọ iri na ise ma ahụ́ gị amalitebeghị ịgbanwe. I kwesịghịkwa ichegbu onwe gị ma ọ bụrụ na ahụ́ gị amalite ịgbanwe mgbe ị na-erubeghị afọ iri. Ọ bụ oge ruo mgbe ahụ́ gị kwesịrị ịgbanwe, ya agbanwewa. E nweghị ihe ị ga-emeli banyere ya.
Oge ahụ́ onye na-eto eto na-agbanwe dị ka ebe mmadụ nọ n’ihe na-ebugharị mmadụ. O nwere ike ịtọ gị ụtọ, ma ọ bụ tụọ gị ụjọ, ma i nwere ike ịmụta ihe ga-enyere gị aka n’oge ahụ
Ọ dị ka ihe a na-akacha achọpụta ma ahụ́ mmadụ gbanwewa bụ na onye ahụ na-etokwu ogologo. Ma nsogbu dị na ya bụ na ọ bụghị akụkụ ahụ́ niile na-eto n’otu mgbe. N’ihi ya, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na otú isi aga ije adịchaghị mma. Obi sie gị ike na ka oge na-aga, ihe niile ga-adị mma.
E nwekwara mgbanwe ndị ọzọ ị ga-ahụ anya.
Ihe ndị na-agbanwe n’ahụ́ ụmụ nwoke:
Ihe ha ji bụrụ nwoke ga-ebukwu ibu
Ịgba ajị na mkpaabụ, n’akụkụ ihe ha ji bụrụ nwoke, nakwa n’ihu
Olu ha ịgbanwe
Ihe ha ji bụrụ nwoke nọkata ọ kwụrụ ọtọ nakwa ọbara ọcha ịpụta ha n’ahụ́ n’abalị
Ihe ndị na-agbanwe n’ahụ́ ụmụ nwaanyị:
Ịgba ajị na mkpaabụ, nakwa n’akụkụ ihe ha ji bụrụ nwaanyị
Ịmalite ịhụ nsọ
Ihe ndị na-agbanwe ma n’ahụ́ ụmụ nwoke ma n’ahụ́ ụmụ nwaanyị:
Ahụ́ isi ísì. Ihe na-akpata ya bụ ọsụsọ na nje.
Ihe ga-enyere gị aka: Ịsa ahụ́ mgbe niile na ịgba senti nwere ike inyere gị aka ka ị ghara ịna-esi ísì.
Pịmpụl. Ihe na-akpata ya bụ nje ndị na-abanye n’akpụkpọ ahụ́.
Ihe ga-enyere gị aka: N’agbanyeghị na ịchụ pịmpụl anaghị adịcha mfe, ịsa ihu mgbe niile na iji ụfọdụ ihe ndị e ji ehicha ihu ehicha ihu gị nwere ike inyere gị aka.
Ihe ndị na-agbanwe n’ime ahụ́ gị nwere ike imetụta otú obi na-adị gị. O nwedịrị ike ime ka obi dị́ gị mma, a nọtụ obere, obi ajọwa gị njọ.
“Taa, ị na-ebe ákwá, echi obi adị gị mma. Iwe wetụ gị, obere oge, obi ọjọọ emee ka ị gaa nọrọ naanị gị.”—Oksana.
Ọtụtụ ndị na-eto eto na-abụ ahụ́ ha gbanwewa, ahụ́ agaghị eru ha ala, ya adị ha ka mmadụ niile hà na-ele ha anya, na-akatọkwa ha. Otú ahụ ahụ́ gị si agbanwe nwekwara ike ime ka obi ghara iru gị ala.
“Mgbe m malitere ito, m na-ama ụma ehulata ehulata ma m gawa ije, m na-eyikwa efe buru ibu. N’agbanyeghị na m ma ihe mere ahụ́ m ji agbanwe, ahụ́ anaghị eru m ala, ihere na-emekwa m. Ọ dịzi m ka ọ bụghị mụnwa.”—Janice.
Otú i si ele ndị na-abụghị nwoke ibe gị ma ọ bụ nwaanyị ibe gị anya nwere ike ịbụ ihe ga-akacha agbanwe banyere otú obi na-adị gị.
“M kwụsịrị iche na ụmụ okorobịa niile na-akpasu mmadụ iwe. Ugbu a, ahụla m na ụfọdụ n’ime ha mara mma, anaghịzi m eche na nwa agbọghọ ịhụ nwa okorobịa n’anya bụ ihe ọjọọ. Okwu a kpụzi n’ọnụ bụ ‘ihe onye a, na-amasị onye a.’”—Alexis.
Ụfọdụ ndị na-eto eto na-achọpụta na n’oge ahụ́ ha na-agbanwe, ha na-enwe mmasị n’ebe ndị bụ́ nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ha nọ. Ọ bụrụ na ụdị ihe a emee gị, echekwala na ị ga-aghọzi onye na-edina nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe ya. Ọtụtụ mgbe, ka oge na-aga, ndị na-eto eto na-akwụsị inwe ụdị mmasị ahụ.
“N’ihi otú m si ejikarị ụmụ okorobịa ndị ọzọ atụnyere onwe m, m malitere inwe mmasị n’ebe ha nọ. Ọ bụ mgbe m totukwuru ka m malitere inwe mmasị n’ebe ụmụ agbọghọ nọ. Anaghịzi m enwe mmasị n’ebe ụmụ okorobịa ibe m nọ.”—Alan.
Gbalịa na-ele ihe anya otú kwesịrị ekwesị. N’eziokwu, ihe ndị ahụ na-agbanwe n’ahụ́ gị, ma ndị ị na-ahụ anya ma ndị na-eme n’ime ahụ́ gị dị gị mkpa. Ihe ọbụ abụ, bụ́ Devid, kwuru nwedịrị ike ime ka obi sie gị ike. Ọ sịrị: “I kere m n’ụzọ dị egwu.”—Abụ Ọma 139:14.
Ejila onwe gị atụnyere ndị ọzọ, gbaakwa mbọ ka ị ghara ịna-echegbu onwe gị banyere otú ị dịzi. Baịbụl kwuru, sị: “Mmadụ na-ahụ ihe anya na-ahụ; ma Jehova na-ahụ ihe dị n’obi.”—1 Samuel 16:7.
Na-emega ahụ́, na-ezukwa ike nke ọma. Ihi ụra nke ọma ga-eme ka ahụ́ ghara ịna-agbakasị gị, ka ị ghara ịna-echekasị onwe gị nakwa ka obi ghara ịna-ajọkarị gị njọ mgbe ị mụ anya.
Etinyela uche n’ihe ọ bụla obi gị gwara gị. Ọ̀ bụ eziokwu na anya mmadụ niile dị n’ebe ị nọ? Ọ bụrụgodị na ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere otú ahụ́ gị si agbanwe, echegbula onwe gị. Baịbụl kwuru, sị “Etinyekwala obi gị n’okwu niile ndị mmadụ pụrụ ikwu.”—Ekliziastis 7:21.
Mụta ịna-ejide onwe gị ma agụụ mmekọahụ gụwa gị. Baịbụl kwuru, sị: ‘Gbaara ịkwa iko ọsọ. . . . Onye na-akwa iko na-emehie megide ahụ́ nke ya.’—1 Ndị Kọrịnt 6:18.
Gwa nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụkwanụ onye ọzọ toro eto ị tụkwasịrị obi ka o nyere gị aka. O nwere ike ime gị ihere ịgwa ha, ma aka ha ga-enyere gị ga-abara gị ezigbo uru.—Ilu 17:17.
Nke bụ́ eziokwu bụ na ihe anaghị adịchara ndị na-eto eto mfe n’oge ahụ́ ha na-agbanwe. Ọ bụkwa oge ahụ ka ha ji etokwu, ma n’ahụ́ ma n’otú ha si eche echiche ma n’otú obi na-adị ha ma n’ihe gbasara ofufe Chineke.—1 Samuel 2:26.